पाकिस्तानी नै चाहन्छन्, विश्वकपमा भारतले जितोस् !
एजेन्सी– अहिले इंग्ल्यान्डमा जारी विश्वकपमा निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरु भइरहेका छन् । अहिलेसम्मका खेलहरु हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका अनुमान गर्न सकिने अवस्था बनिसकेको छ । त्यसो त, क्रिकेटमा यस्ता अनुमानहरु फेल खाने सम्भावना पनि बढी हुन्छ ।
जे होस्, अहिले जारी प्रतियोगिता निकै रोमान्चक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । यसमा भारत र पाकिस्तानलाई विशेष नजरका साथ हेरिएको छ ।
बिहिबार वेस्टइन्डिजलाई हराएको भारतले अब आइतबार इंग्ल्यान्डसँग खेल्दै छ । अर्कोतिर, दक्षिण अफ्रिका तथा न्युजिल्यान्डलाई हराएपछि पाकिस्तान पनि सेमीफाइनलमा जाने आशा बाँकी नै रहन्छ । तर, पाकिस्तान सेमिफाइनलमा पुग्न अर्को पनि कारण रहन्छ, भारतले आइतबार हुने खेलमा इंग्ल्यान्डलाई हराउनै पर्छ ।
यही रोमान्चक अवस्था तथा समीकरणको हिसाबलाई ख्याल गर्दै इंग्ल्यान्डका पूर्वकप्ता नासिर हुसैनले ट्विटरमा एउटा प्रश्न सोधेका छन्, ‘यो प्रश्न सबै पाकिस्तानी फ्यानहरुका लागि हो । आइतबार हुने खेलमा कसको समर्थन ? भारत कि इंग्ल्यान्ड ?’
नासिरले यो ट्विट मात्र के गरेका थिए, पाकिस्तानी प्रशंसकले उनलाई जवाफ दिन थालिहाले । कतिपयको जवाफ त निकै आकर्षक रहेको छ जुन यसअघि सोचिएको पनि थिएन ।
कोही पाकिस्तानी प्रशंसकले जय हिन्द लेखेका छन् भने कतिले वन्दे मातरम । एक ट्विटर प्रयोगकर्ता अहमदले लेखेका छन्, ‘हामीलाई आफ्नो छिमेकीसँग निकै प्रेम छ, हामी भारतलाई समर्थन गर्नेछौँ ।’
खेल आफ्नो पक्षमा परोस् भन्नका लागि पाकिस्तानी समर्थकले भारतलाई समर्थन गर्नु रोमान्चक होइन त ?
प्रकाशित मिति : असार १४, २०७६ शनिबार १९:६:१५,